Baarlamanka oo doonaya in si aad ah loo adkeeyo ciqaabaha dambiyada hubka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hubka lagu qabtay Malmö inta u dhaxeysay 2015 iyo 2016. Foto: Björn Lindgren/TT
Baarlamanka oo doonaya in si aad ah loo adkeeyo ciqaabaha dambiyada hubka
La daabacay fredag 29 december 2017 kl 09.50
Kowda bisha Janaayo ee sanadka soo socda, waxaa la kordhin doonaa ciqaabta lagu muto dambiyada culus ee loo adeegsado hubka hase yeeshee ka hor inta uusan sharciga cusub dhaqan gelin, ayay gudiga cadaaladda ee baarlamanka waxa ay doonayaan in dowlada sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gudbiso hindise lagu sii adkeynayo shuruucda hubka ka degsan, sida uu sheegay Morgan Johansson.
Wasiirka cadaaladda Morgan Johansson ayaa imminka sheegay in uu ka fekerayo sidii uu tallaabo uga qaadi laha.
– Dalabkeena oo idil ayaa ah in la waayo hubka waddooyinka yaalla,
Sanadihii ugu dambeeyay tirada dadka ku dhinta rabshado hub la isku adeegsado ayaa aad u korortay.
Si looga hortago dhibkaasi, ayuu baarlamanka dalka waxa uu go’aan ku gaaray in la sii labalaabo ciqaabta ugu yar ee dambiga hubka, iyada oo kor looga qaadey sanad lagana dhigay labo sano.
Tani ayaa micnaheedu tahay in qofkii lagu arko isaga oo sita hub - sida uu sharcigu yahay - in booliska ay xiri karaan inta maxkamad laga keenayo sidoo kale booliska ayaa isticmaali kara habka dhageysiga sirta kolka ay ku raad joogaan baaritaano dad hub looga shakisan yahay.
Wasiirka cadaaladda Morgan Johansson ayaa ku tilmaamay isbedel muhiim ah tallaabooyinka socda.
– Isbedelka waa mid soo koobaya inta badan kuwa aan ka hadleyno ee ah dambiileyaasha waaweyn ee ee hubka ku dhex sita magaaladda, ayuu yiri wasiirku.
Waxaa sidoo kale laga kordhin doonaa afar sano oo la gaarsiin doonaa shan sano oo xabsi ah ciqaabta ugu badan ee dambiyada culus ee hubka la xiriira.
Sidoo kale, waxaa la adkeyn doonaa ciqaabta ugu yar ee dambiyada hubka saa’id ka ah iyada oo kor looga qaadeyo saddex sano lana gaarsiinayo afar sano oo xabsi ah.
Balse guddiga cadaladda ee baarlamanka ayaa doonaya in halkaasi laga sii dheereeyo wuxuuna ka dalbanaya dowlada in ay la timaado hindise xambaarsan ciqaabo ka sii adag kuwa ay imminka soo gudbisay. Guddiga ayaa doonaya xitaa in la kordhiyo ciqaabta ugu badan ee dambiyada hubka saa’idka iyo sidoo kale dambiyo badan oo hubka lagu galo oo maanta loo arko in ay yar yihiin in laga dhigo kuwo waaweyn.
Madaxa guddiga cadaaladda baarlamanka Tomas Tobé, oo ka tirsan xisbiga Moderate-ka ayaa oranaya in ay waajib tahay in si adag loola dhaqmo maafiyada dambiilayaasha ah.
– Micnaha waxa uu yahay in aan dooneyno sharci adag oo hubka ah. Nasiib daro dowlada dayacaad baa ka muuqato marka ay hindisaha la timid baarlamanka sidaasi daraadeed ayuu guddiga cadaaladdu ku khasbanaaday in uu qaado tallaabo uu ku toosinayo go’aanka dowlada, ayuu yiri Tomas Tobe.
Wasiirka cadaaladda Morgan Johansson ayaa sheegay in uu ka fekerayo in uu tallaabo qaado, isaga oo sheegay in baare dowlada ka irsan loo igman doono in uu soo diyaariyo hindise sida sharciga loogu adkeyn karo sida uu baarlamanku doonayo.
Tomas Tobé ayaa dhankiisa sheegay in guddiga baarlamanku uu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo saaro ciqaabaha la sii adkeeyay ee dambiyada hubka, isaga oo sheegayna haddii dowlada ay dooneyso in baarlamanka dedejiyo sharciyada in xisbiyada isbaheysiga ay la taagan yihiin taageeradooda.